တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်တော်ဝင်စင်တာမိသားစု | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်တော်ဝင်စင်တာမိသားစု
Posted by student on Sep 19, 2011 in Copy/Paste |9comments
တော်ဝင်စင်တာပဲ တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်တာလား မထင်လိုက်နဲ. သူတို.ရှေ.က စိန်ဂေဟာဆို ပို.ဆိုး သိကြမှာပါ သူခိုးနဲ. လူကောင်းနဲ. မှားဖမ်းတာတွေ.လေ Market တည်းက date လွန်တွေ. ကပ်ခွာလုပ်ပြီး ပြန်ရောင်းနေတာ မပြောချင်လို.:P လုပ်လိုက်သေးတယ် ကံစမ်းမဲတည်းလေ ရှေ.က တော်ဝင်စင်တာက အရင်လုပ်ပြတာ ဒါနဲ.ဘယ်ရမလည်း စိန်ဂေဟာကအားကျမခံ သူတို.စီးနေတည်း သူတို.စက်မူဆုံထုတ် ကားများကိုဆေးဘော်ဒီပြန်သုတ်ပြီး ပြည်လမ်းတော်ဝင်စင်တာနဲ. ပါရမီစင်တာမှရှေ.မှာ ချပြထားတည်းဗျ မသိရင်တော. ကားနှစ်စီး သုံးစီးကံစမ်းမဲ.ပေးမယ်ပေါ့ဗျာ ပေးတော.တစ်စီးတည်း တော်သေးတာပေါ့ ပေါက်သွားတည်းလူက ကားမမောင်းတတ်လို… ပြောပြချင်သေးတည်း အများကြီး…. ခွင်.တည်းမှ ပြောမယ် စိန်ဂေဟာ တရုတ်သူငှေး ၀န်ထမ်းတွေ. အပော် အချိန် ခိုး ပုံတွေ. ကလိန်ကကျစ် ကျပုံ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အမှီးဖြတ် အမှီးစား ခေါင်းဖြတ် ခေါင်းစား လုပ်ပုံတွေ.လေ…
အဲ့ဒီကား ကြီးတွေ ရပ်ထားတုန်းက လှည်းတန်းစိန်ဂေဟာ ရှေ့မှာလည်း ပြထားသေးတယ်… စိန်ဂေဟာ ဆိုင်ခွဲတွေ အများကြီးမှ ပေးတာ … တစီးတည်းကို ဟိုလိုလို ဒီလိုလို လုပ်ပြထားသေးတယ် .. ကွန်ပလိမ်း တက်လျှင်လည်း white lie ပါဆိုတာမျိုးတွေ ကြားနေရဦးမယ်
စာက အရမ်းတိုလွန်းနေသလားလို့လေ … အဓိပ္ပါယ် နှစ်မျိုးပါတဲ့(((သူတို.တော်ဝင်မိသားစုဖွင်.ဆိုင်ရပ်တယ်))) ဆိုတဲ့ စာမျိုးက ပိုပြီး details ရေသင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ် … ။ ဘယ်သူက ဘယ်လိုမေးလို့ သုံးစင်းက သူတို့သုံးဖို့ဆိုတာမျိုးသိခဲ့တာလဲ စသဖြင့် သေချာလေး ထည့်ရေးပေးလျှင်ပိုကောင်းမှာပါပဲ … ။
အခုတော့ ဖတ်သာ ဖတ်လိုက်ရတယ် ရေရေ လည်လည် သတင်းမဟုတ်တော့ … အချိန်တွေ waste ဖြစ်သွားသလိုပါပဲ …
ဆိုင်ရပ်တယ်ဆို တာဘာပါလိမ့်နော်။ဟယ် ကားက အဟောင်းကြီးလား။ခုမှ သိတယ်လေ။လုပ်ရက်တယ်။ကိုယ့်ဖောက်သည်ကို ပြန်ကြည့်သင့်ပါတယ်။
၀န်ထမ်းတွေအပေါ်အချိန်ခိုးတာတော့ တနိုင်ငံလုံးအနှံ့ပဲ မခံချင်မှအဆုံးပဲ ကိုယ်လဲ လက်တွေ့ကြုံ ခံစားနေရလို့ပါ
လည်သလိုစား လုပ်ချင်သလိုလုပ်နေကြတာ မြန်မာတပြည်လုံးမှာပါပဲလေ။
အဲဒါတွေကို ဖွင့်ချပြီး ရှုံ့ချတာ၊ ဆန့်ကျင်တာတွေ များများလုပ်ပေးကြပါ။
သွားစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့ဗျာ။ ဒါက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်ပဲလေ။
လောကဆိုတာ သုခကြီးပဲရှိနေမှတော့ဘယ်မှာ နေလို့ကောင်းတော့မလဲဗျာ။
ကျုပ်ကတော့ လူကြီးဖြစ်အောင်ပဲနေတော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီဗျာ(နေ့တိုင်း ထမင်းကို အိမ်ကမသဒ္ဒါလောက်အောင်ကို စားနေတယ် ဒါမှ အကောင်ကြီးကြီး လူကြီးဖြစ်မှာလေ)